Saturday September 03, 2016 - 00:29:36 in Articles by Super Admin
Haddii aad maqli jirtay safaarad heblo ayaa farriin feejignaan ah kasoo saartay dal heblo, hadda waxaa soo baxay, oo badelay saaxiibkeey Dahir Alasow oo noqday "Digniin bixiye weyn, oo dhanka ammaanka ah". Lagana hadal hayo dalka.
Muqdisho oo aan joogo, markii meelo uu sheegay inay weeraro kusoo fool leeyihiin ay u dhaceen, sida uu sii sheegay. Hadda waxaa bilaabatay inay meelaha uu ka hadlay difaac sii galaan oo digniintaasi u hoggaansamaan.
Tusaale, Pizza House oo uu farriintiisa u danbeysay ku sheegay in weerar kusoo socdo. Waxay sameysteen diyaar garow ammaan. Waxaana ay isku dayeen inay labada wado ee geesaha ka mara inay difaac ka xirtaan, si ay ammaankooda u ilaaliyaan. Maxaase dhacay? Howshii ay wadeen maanta waxaa ka hor istaagay madaxda degmada Hodan. Inkastoo ay madaxda Pizza House heystaan ogolaanshaha wasaarada ammniga. Wasiirkana uu si cad u sheegay inay ganacsatada ammaankooda iyaga ilaashadaan.
Haddaba, haddii ganacsatada Pizza House loo diiday ilaashiga ammaankooda, asee haddana aysan madaxda degmada iyaga ciidan ilaaliya goobtaasi keeneyn. Haddii ay wax ka dhacaan halkaasi ( Allaha ka hayee) , yaa qaadanaya danbigaasi? Madaxda degmada iyo wasaarada ammnigase, yaa sareeya oo amarka siinaya ganacsatada? Muungaab ayaan shalay ku ogeyn isaga oo wasiirka amniga ku diiday amar uu wado ku xiray, waana ogeyn inuu xilkiisa ku waayey, ee madaxda degmada Hodan, tolow wadadee marayaan? BAL ADBA!!
Nolosha shacabka iyo ammaan ilaalintooda yeysan muran gelin, ee waxkasta oo lagu sugi karo, hala fududeeyo, intii beri warbaahinta laga barooran lahaa.